नेपाली पब्लिक शनिबार, साउन ९, २०७८
साहित्य भन्नु केवल अनुभूतिहरूको संवेग मात्रै होइन, त्यसलाई कलात्मक र काव्यात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न पनि हो । साहित्यका अनेक विधाहरू छन्, त्यसमध्य कविता विधाको पनि उप विधा मानिने मुक्तक हिजोआज अत्यन्त लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
पहिला टुक्रा कविताको रूपमा लिइए पनि अहिले मुक्तकले पाएको व्यापक लोकप्रियताको कारण एकापट्टी यसबारे खोजीनिती र चासो राख्नेहरूको एउटा ठूलै जमात खडा भएको छ । अर्कोपट्टी गजÞलरकविता लेख्नेहरू भने यसलाई अचारको रूपमा परिभाषित गर्ने गर्छन् । मुक्तकलाई गजल र कविता भन्दा तल राखेर हेर्नेहरू पनि उनै हुन् जसले हरेक कविता समारोह र गजल मुशायरामा आफ्नो रचना (मेन डीस) सुनाउनु अघि एउटा मुक्तक (अचार) सुनाउने गर्छन् । अर्थात् खानु अघि नै पहिला अचार चाट्छन् ।
तर कतिपय कवि तथा गजलकारहरू यस्ता पनि छन्, जसले मुक्तक लेखनलाई आफूले न्याय गर्न नसकेकोले मुक्तक लेख्न धक लाग्ने कुरा स्पष्ट बताउँछन् । जे जस्तो रूपमा परिभाषित गरिए पनि चार हरफको मुक्तक आफैंमा एउटा महाकाव्य, उपन्यास वा सिङ्गो कथाको भाव वहन गर्न सक्ने विधा हो, यसमा कुनै शङ्का छैन ।
चार हरफमध्ये पहिलोले विषयको उठान, दोश्रोले समर्थन, तेश्रोले कौतुहलता उत्पन्न गर्दै चौथोले अत्यन्त नाटकीय पारामा चोटिलो झटारो हानेर पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ । अर्थात् ठोस र सारयुक्त कथ्य समेटेको हुन्छ ।
‘मुक्तक’ शब्द खासमा संस्कृतबाट आएको भए तापनि बारौं शताब्दीतिरका फारसी कवि उमर खैय्यामका ‘रुबाइ’लाई फिट्जेराल्डले अँग्रेजीमा अनुवाद गरेपछि विश्वप्रसिद्ध हुन पुगेको हो । अहिले हामी कहाँ लेखिने मुक्तक यिनै शैलीको अनुकरण हो । संरचनागत हिसाबले अहिले लेखिंदै आएको रुबाइयत शैलीको चतुश्पदीय मुक्तकलाई काव्यको लघुत्तम उपविधा मानिन्छ ।
चार हरफ मध्य तेश्रो हरफ अनुप्रास विहिन रही बाँकीका तीन हरफ अनुप्रासयुक्त पद्यात्मक चतुष्पदीय रचना नै मुक्तक हो । तर मुक्तक, संस्कृत साहित्यको पौराणिक ग्रन्थहरु वेद, पुराण हुँदै नेपाली साहित्यमा करिब २ सय ४० वर्ष अघिको शक्तिबल्लभ अर्ज्यालको ‘तनहुँ भकुण्डो’ बाट पृष्ठभूमी तयार हुँदै भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट हुँदै क्रमशः वि. सं. २०१० तिर भीमदर्शन रोक्काबाट आधुनिक कालको उठान भएको पाइन्छ ।
६० को दशकसम्म पनि कुनै ठोस आकार नपाएको मुक्तकले २०७० सालमा ‘नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान’ तथा ‘मुक्तक मञ्च पोखरा’को सहआयोजनामा भएको ३ दिने अन्तरविमर्श कार्यशाला गोष्ठीबाट नयाँ बाटो समात्यो । गोष्ठीले मुक्तक सम्बन्धि ५ बूंदे घोषणापत्र जारी गरेपछि यसको स्वरूपमा आएका विवादहरू टुंगिएको मान्न सकिन्छ । त्यसअघिसम्म मुक्तक भनेर ३ देखि ५ र ७ हरफसम्म लेखिएको पनि भेटिन्थ्यो । त्यो युगदेखि अहिलेको युगसम्म आईपुग्दा मुक्तकको स्वरूपमा निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको तथ्य पनि छ ।
अहिले चार हरफ चट्ट मिलेको आयताकार मुक्तकले कुनै एउटा विशेष बिषयमा मात्र बोलेको हुनुपर्ने र सबै हरफहरू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्ने यसको नियम छ । चार हरफमध्ये पहिलोले विषयको उठान, दोश्रोले समर्थन, तेश्रोले कौतुहलता उत्पन्न गर्दै चौथोले अत्यन्त नाटकीय पारामा चोटिलो झटारो हानेर पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ । अर्थात् ठोस र सारयुक्त कथ्य समेटेको हुन्छ ।
चार हरफमा एउटा सिङ्गो कथनलाई टुंग्याउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । मुक्तक, गागरमा सागर बिन्दुमा सिन्धु अटाउने कला हो ।
त्यसैगरी मुक्तकमा मिठास भर्न कलात्मक ढङ्गबाट सन्दर्भ अनुसारको भाषाशैली प्रयोग गरेर बिम्ब, प्रतीक आदिको सहयोगले आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न सकिन्छ । कलात्मक र काव्यात्मक ढङ्गबाट भन्दा मीठो र चित्ताकर्षक पनि हुन्छ ।
देशको प्रतिकूल परिस्थितिको कारण जीवन–यापनको चुनौतीलाई स्वीकारेर आफ्नो घर--आँगन छोडेर बाध्यताबस परदेशिएका नेपालीहरूको नजिकको साथी भन्नु नै साहित्य भएको छ । परदेशमा छँदाको अनुभूतिहरु, आफ्ना पीडाहरूलाई प्रस्फुट गर्ने माध्यम साहित्य नै भएको छ । त्यसैले पनि होला साहित्य सञ्चारको सबैभन्दा सजिलो माध्यम बनेको फेसबुकमा सबैभन्दा धेरै लेखिने विधा शायद मुक्तक नै छ । तर त्यसो भन्दैमा मुक्तक लेख्न सजिलो छ, नठानौं ।
चार हरफमा एउटा सिङ्गो कथनलाई टुंग्याउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । मुक्तक, गागरमा सागर बिन्दुमा सिन्धु अटाउने कला हो । अर्थात् थोरै शब्दमा विशाल भाव बहन गर्ने क्षमता मुक्तकले राखेको हुन्छ । त्यसैले देख्दा सजिलो लेख्दा दुष्कर छ मुक्तक लेखन । अनुप्रासयुक्त चार हरफ हुँदैमा मात्रै मुक्तक बन्दैन । मुक्तकमा गहिराइयुक्त भाव हुन जरूरी छ । र, मुक्तकका हरेक हरफहरु बीच अन्तरसम्बन्ध रही स्वयममा पूर्ण, सघन भाव सहितको तीव्रता, विषय निरपेक्ष तथा प्रभावोत्पादक हुनुपर्दछ । जे होस्, यतिबेला नेपाली मुक्तक उर्बर कालमा छ । अर्काइभबाट
नेपाली पब्लिकको थप विशेष साहित्यिक प्रस्तुती:
जुन प्रधानका दुई मुक्तक
अनुप खतिवडा जिज्ञासुका दुई मुक्तक
मन्दा पौडेलका दुई मुक्तक
गोम बिक्रमका तीन मुक्तक
सुनिल अधिकारीका तीन मुक्तक
धर्मिला कार्कीका दुई मुक्तक
पूजा आचार्यका दुई मुक्तक
मीनादेवी फयेलका दुई मुक्तक
मिलन समीरका दुई मुक्तक
प्रदीप प्रखर पोखरेलका दुई मुक्तक
मीना चौलागाईंका दुई मुक्तक
निर्दोष शिवका दुई मुक्तक
प्रतिमा ढकालका दुई मुक्तक
देवी कार्कीका दुई मुक्तक
विन्दामाया तामाङका दुई मुक्तक
मुक्तक प्रकाशनमा होडबाजी, गुणात्मक फड्को खै ?
साहित्यिक गतिविधिमा असमेली मुक्तक मञ्चको लोभलाग्दो सक्रियता
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०७८
बिहीबार, असार १६, २०७९ नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने
बिहीबार, असार १६, २०७९ रक्षा मन्त्रालयले समितिको अवज्ञा गर्‍यो : भीम रावल
बिहीबार, असार १६, २०७९ मिर्गौला पीडित बालकलाई आर्थिक सहयोग
बिहीबार, असार १६, २०७९ विपद् सतर्कता अपनाउन जुट्दै स्थानीय तह
रक्षा मन्त्रालयले समितिको अवज्ञा गर्‍यो : भीम रावल नेपाली पब्लिक